नर्सको समाजसेवी मन : बनिन् धेरैका लागि नयाँ जीवनदाता - Ratopati
समाजसेवी सीता गुरुङ २६ वर्षदेखि अमेरिकामा बस्दै आएकी छन् । बसेरी, धादिङकी गुरुङले सुविधासम्पन्न देशमा बसे पनि आफ्नो सालनाल गाडिएको माटो बिर्सेकी छैनन् । गायिकासमेत रहेकी उनले अमेरिकामा बसे पनि अकालमा ज्यान गुमाउन नपरोस् भनेर बसेरीमा सामुदायिक अस्पताल स्थापना गरेकी छन् । एक महिलालाई स्टाफ नर्स पढाएकी छन् । धादिङकै लापा गाविसमा रहेको लापा स्वास्थ्य सेवाकेन्द्रको स्वास्थ्य प्राविधिकलाई दुई वर्षको तलब आफैंले व्यवस्था गरेकी छन् । समाजसेवामा लाभ–हानिको कुरा हुँदैन भन्ने उनको मान्यता छ ।
बसाइ अमेरिकामा, सामुदायिक अस्पताल गाउँमा
अमेरिका पुगेको १७ वर्षपछि नेपाल फर्केकी उनी आफ्नै गाउँ बसेरी पुगिन् । गाउँमा कान पाकेका बच्चाले उपचार पाउन त्यति सजिलो थिएन । सामान्य चोटपटक लागेकाले उपचार पाउनु असम्भव थियो । लडेर हात, खुट्टा भाँच्चिएकाले समेत घरेलु उपचारमै चित्त बुझाउनुपरेको गाउँवासीको पीडा देख्दा उनले आफू अमेरिका बसेको अर्थ देखिनन् । भनिन्, ‘त्यो असह्य पीडा देख्न सकिनँ । तसर्थ, देउराली सामुदायिक अस्पताल (बसेरी क्लिनिक) खोलेँ । अस्पतालका लागि तीन कर्मचारी राखेकी छु । उनीहरूले स्थानीयलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । उनीहरूको तलब म आफैंले बेहोर्दै आएकी छु ।’
गोरखा भूकम्पले देउराली सामुदायिक अस्पताल भवन पूर्ण रूपमा ध्वस्त बनाए पनि उसले पाल टाँगेर सेवाग्राहीलाई सेवा दिँदै आएको छ । अमेरिकाको सियाटल वासिङटनमा बस्दै आएकी गुरुङले सियाटलमा स्थापित संघ–संस्था र नेपालीबाट संकलित १ करोड १५ लाखमध्येबाट बसेरीमा अस्पताल भवन पुनःनिर्माण गर्दै छिन् । भवन निर्माण महिना दिनभित्र सम्पन्न हुने उनले सुनाइन् । त्यस्तै, देउराली सामुदायिक अस्पताल प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनका लागि औषधिका साथै उपकरण थपिनेछ । त्यतिमात्रै होइन, उनले धादिङको लापा गाविसमा रहेको लापा स्वास्थ्य सेवाकेन्द्रको स्वास्थ्य प्राविधिकलाई दुई वर्षसम्मको तलब १ लाख ४० हजार रुपैयाँसमेत आफैंले जोहो गरिदिएकी छन् ।
संवेदनशील बिरामीलाई आर्थिक सहयोग
मानिसका लागि सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति भनेको स्वास्थ्य हो । बाँच्न पाए हाँस्न पाइन्छ भन्ने नेपाली उखान नै छ । सो उखानसँग सीता गुरुङ परिचित छिन् । त्यही भएर गुरुङले संवेदनशील बिरामीलाई प्राथमिकतासाथ आर्थिक सहयोग गर्दै आएकी छन् । उनले आजसम्म सयौं संवेदनशील बिरामीलाई सहयोग गरेकी छन् । उनको सहयोग पाएर धेरैले नयाँ जीवन पाएका छन् । प्रा. डा. ओम गुरुङ (त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुर समाजशास्त्र/मानवशास्त्र विभागप्रमुख) को मिर्गौला प्रत्यारोपण, श्रीमती जुद्ध गुरुङको मुटु उपचार गर्न उनले उल्लेख्य मात्रामा आर्थिक सहयोग गरेकी थिइन् ।
गीतकारसमेत रहेकी गुरुङले कमल गुरुङको मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न १ लाख १४ हजार, जिब्रोको क्यान्सरपीडित वसन्त सिंजालीमगरको उपचारका लागि १ लाख ६८ हजार सहयोग गरेकी थिइन् । संगीतकार शुक गुरुङको औषधोपचार खर्च र एसिड प्रहारबाट घाइते सीमा बस्नेत र संगीता मगरलाई समेत उनले आर्थिक सहयोग गर्न पछि परिनन् । गुरुङबाट सहयोग पाउने उल्लिखित व्यक्ति प्रतिनिधि पात्रमात्रै हुन् ।
दैवीविपत्तिमा परेका पनि प्राथमिकतामा
२०७२ वैशाख १२ गते गोरखाको बारपाकलाई केन्द्र बनाएर शक्तिशाली भूकम्प गएको थियो । भूकम्पमा परी झन्डै ९ हजारले ज्यान गुमाए । करिब २३ हजार घाइते भएका थिए भने गोरखा भूकम्पले धेरैलाई पीडित बनायो । गुरुङले कन्सियस कनेक्सन फाउन्डेसनमार्फत गोरखा भूकम्पपीडितका नाममा १ करोड १५ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेकी थिइन् । उनले गोरखा, धादिङ, रसुवा, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक र भक्तपुरका भूकम्पपीडितलाई आर्थिक सहयोग गरेकी हुन् । भूकम्प गएको वर्ष दिनसम्म पनि राहत नपुगेको रसुवाको हक्कुका ९३ घरपरिवारलाई फाउन्डेसनले खाद्यान्न, धादिङको सेर्तुङ र ढोलामा लत्ताकपडा वितरण गरेको थियो ।
सन् १९९० मा अमेरिका पुगेकी उनले बाढीपीडितलाई पनि सहयोग गरेकी थिइन् । सन् १९९६ को दसैंमा बसेरीमा आएको बाढीले स्थानीयको बालीनाली पुरिदिएपछि गाउँका बाढीपीडित सबैलाई प्रतिपरिवार पाँच पाथी चामल, तीन पाथी दाल बाँडेर उनले परोपकारी काम गरेकी थिइन् । उनले झन्डै ८ लाख खर्चेर गोरखाको घाटबेँसीमा विद्यालय भवन र धादिङ बसेरीका दुई घर परिवारलाई करिब १६ लाख रुपैयाँमा ‘अर्थ ब्याग’ घर निर्माण गर्नुका साथै बसेरीमै ५ सय थान सोलार बत्तीसमेत वितरण गरेकी छन् ।
धेरैका नयाँ जीवनदाता
मानिसको जुनी भनेको अनुभव नै अनुभवको सँगालो हो । नेपालमा रहँदा बसेरीकै स्कुलमा १३ महिना अध्यापन गरेकी उनले घाँस काट्न जाँदा लडेर तल्लो हर (कम्मर) भाँचिएका युवतीको काठमाडौंको वीर अस्पतालमा दुई महिना लगाएर उपचार गराएकी थिइन् । यो सन् २००४ को कुरा हो । ती महिला उनीप्रति आजीवन ऋणी छन् । त्यस्तै सन् २००९ मा बसेरी–१, डाँडागाउँकी एक महिलाले बच्चा जन्माए पनि साल (बच्चाको साथी) नझर्दा दुई सातादेखि पीडित थिइन् । बच्चाका साथी नझर्दा उनको ज्यान जोखिममा थियो । त्यस्तालाई समेत बचाउने उनी धेरैका लागि नयाँ जीवनदाता भएकी छन् ।
त्यतिमात्रै होइन, नर्थ–वेस्ट तमू गुरुङ समाज अमेरिका अध्यक्षसमेत रहेका उनले ब्रेन ट्युमरपीडित रश्मि गुरुङ र तीन वर्षदेखि आँखा नदेख्ने र हिँड्न नसक्ने रूप घले गुरुङको १ लाख ३० हजार रुपैयाँ खर्चेर उपचार गरिदिएकी थिइन् । नयाँ जीवन पाएका गुरुङद्वयको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ ।
गीत गाउँदै समाजसेवामा लगाउँदै
अमेरिकाको मेचिगन युनिभर्सिटीअन्तर्गतको एक परियोजनामा काम गरेको अनुभव सँगालेकी उनी गायिका, गीतकार र संगीतकारसमेत हुन् । रेडियो नेपालबाट स्वर परीक्षा पास गरेकी उनको सात गीतिएल्बम सार्वजनिक भइसकेको छ । बाल्यकालदेखि नै रोधीँघर पुगेर गीत सुन्ने उनले अमेरिकाको विभिन्न सहरमा गीत गाउँदै, गीतिएल्बम बेच्दै समाजसेवामा लगानी गरेकी छन् । उनले गुरुङ र नेपाली चलचित्रमा अभिनय पनि गरेकी छन् ।
अमेरिकामै कियर गिभर स्थापना
नेपालमा रहँदा आइएसम्मको अध्ययन पूरा गरेकी उनी नर्सिङ पेसामा आबद्ध छिन् । अमेरिकाबाट नर्सिङमा एसोसियट पूरा गरेकी उनले त्यहाँ कियर गिभर स्थापना गरेकी छन् । त्यहाँ अवकाशप्राप्त, शारीरिक रूपमा अशक्त, घाइते र रोगीले आश्रय लिएका छन् । गुरुङ उनीहरूलाई सेवा गर्न पाउँदा दंग छिन् ।
द्वैध नागरिकता माग
कानुनतः अमेरिकी नेपाली सीता गुरुङ नेपाल सरकारसमक्ष द्वैध नागरिकता माग राख्छिन् । भन्छिन्, ‘२६ वर्षदेखि यता बसे पनि अमेरिकी हुँजस्तो लाग्दैन,’ उनको माग छ, ‘नेपाल सरकारले द्वैध नागरिकता व्यवस्था गरिदिए व्यापार/व्यवसाय गरी मलाई नेपालमै बस्ने मन छ । अमेरिकामा सिकेको सीप नेपालमा कार्यान्वयन गर्न पाए नेपालीको नाताले अर्थपूर्ण हुन्थ्यो ।’